दुई अर्बको लागतमा पुल्चोक–गोन्द्राङ सडक ६ लेनको बन्दै — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पूर्वाधार > दुई अर्बको लागतमा पुल्चोक–गोन्द्राङ सडक ६ लेनको बन्दै
चितवन । चितवनको पुल्चोकदेखि गोन्द्राङसम्मको सडकलाई ६ लेनको बनाउने काम अघि बढेको छ ।
सडकको दुवैतर्फ फुटपाथ, ढल, सर्भिस लने छुट्याइएको छ । यस्तै छुट्टै बोलपत्रमार्फत भरतपुर महानगरपालिकाले सडकको दुवैतर्फ स्मार्ट लाइट जडानको तयारी गरेको छ । सो सडकखण्डमा विद्युत् अण्डरग्राउण्ड गर्ने तयारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।
महानगरपालिकाभित्र हाल आँपटारीबाट केन्द्रीय बस टर्मिलन चोकसम्मको बाइपास सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । पुल्चोक–गोन्द्राङ सडक विस्तारपछि नारायणगढ र भरतपुर बजार क्षेत्र व्यवस्थित हुने भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले बताइन् । उक्त सडक बनेपछि भरतपुरको स्वरूप नै परिवर्तन हुने उनको भनाइ छ ।
२०७७ भदौ २८ गते १३:२३ मा प्रकाशित
बुधबारदेखि टिकटक बन्द हुने !
पर्वतारोहण संघमा लामा र शेर्पाको प्यानलै चुनावी मैदानमा
सकियो गोंगबु हत्याकान्डको अनुसन्धान: कल्पनाको बयानमा के छ ? प्रहरीले बुझायो यस्तो प्रतिवदेन !
मेगा बैंकको ११.७५% लाभांश पारित गर्न कात्तिक २९ मा एजीएम
बागमती प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख जातिका लागि आवास निर्माण गर्ने